Họtelu ndi di na Ibadan, Oyo - Tinye akwụkwọ ugbu a, Kwuọ ụgwọ ma emesi a!
Ihe Nkowa Banyere Ibadan
Ibadan, bụ isi obodo nke Oyo Steti burukwa nke atọ na obodo ndi kasi ukwuu na obodo ndi meperemepe na Nigeria (site na onu ogugu madu) ma enwetacha Lagos na Kano. Tupu ruo mgbe Nigeria nwere onwe ya site na aka ndi mbiara chiwa, Ịbadan bụ ndị kasị ukwu na obodo na ekwoekwo na Nigeria. Ịbadan nwere ma n’enye ihe echekwa mgbidi obodo nke oge ochie bu nke kwuruchim kemgbe ụbọchị nke ndi mbiara chiwa ọchịchị nwa beeke (British colonial) na ihe ncheta mrịba ama nke okè ala ya. Ịbadan bu otu akụkụ obodo ochie eji elu ụlọ ya na acha aja aja ma ọ bụ akwukwo kporonku mara bụrụ kwa obodo mepere emepe. Obodo a, dị ka ọtụtụ obodo Yoruba ndi ozo nwere akụkọ nkuzi ihe di ukwuu na ihe nketa omenala. Dị ka obodo nke ji nwayọọ nwayọọ ghọrọ ogige ebe azumahia ahia, e nwere ọtụtụ họtelu na Ịbadan.
Ebe ndi Enwere ihe ngosi na Ibadan
Ịbadan bụ ụlọ nke mahadum mbụ na Nigeria, mahadum Ịbadan bu nke atọrọ ntọala ya na afọ 1948. Ogige ebe a na azu umu anumanu (Zoological garden) nke mahadum a nabụ ebe onye njem nleta o bula na acho ịhụ anụ ọhịa ndi di iche iche na aghaghi I ga maka ịhụ anụ ọhịa ndi dị ka Agụ iyi, Adaka, Ọdụm, Udele na Agwọ. Ụlo koko ama ama nke onye isi ala ọdịda anyanwụ mbu Obafemi Awolowo nwuru anwu wuru na afo ochie (60s) ndi gara-aga. Nke na ekpuchi ụgbọala Chief Ladoke Akintola nwuru anwu gbara, ebe ndota ngwa agha ochie nke idi n’otu nke Nigeria bu nke na egosi omenala na akụkọ ihe ndi mere mgbe ochie. Ọdịdị Ụlọ Nzukọ Mapo nke ndi mbiara chiwa nke mgbe ochie bụ ebe ọzọ di nma ịrịba ama na ime obodo Ibadan. Ihe foduru na eriri udo igwe nke ndi nkpọrọ eji kedo ndi dara iwu utụ isi ka nọ kwa n’ ime ụlọ nzukọ a rue taa. Premier Họtelu bu nke di na elu ugwu na Ịbadan nke na enye ihe nlere anya nke obodo a si na ebe di elu. Ebe ndị ọzọ ekwesiri ịhụ bụ ogige nke ihe omenala, Obí Irefin, Mbara ogige nke ochichi etiti nke di na Oyo bu nke a na akpo na okwu beeke (Old Oyo National Park na IITA Forest).
Ime Njem Mkpaghari n’ime Obodo Ibadan
Otu nime uzo nke kacha eji eme njem na Ibadan bụ site na iji ụgbọ ala bọs, ụgbọ ala tagzi na ọgba tum-tum. Ụgbọ ala bọs ndi a na-akpọ Danfo na-agbahari nime Ibadan bu nke I purukwara I kwusi n'akụkụ ụzọ. Ọgba tum-tum ama di ka Okada na adi ngwa-ngwa na I gafere ihe fachi-fachi nke ugboala na okporo ụzọ.